Warbixin-:Maxaa ugu wacan kororka duqeymaha Maraykanka ee Soomaaliya? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Warbixin-:Maxaa ugu wacan kororka duqeymaha Maraykanka ee Soomaaliya?
Warbixin-:Maxaa ugu wacan kororka duqeymaha Maraykanka ee Soomaaliya?
Waxaa aad usoo kordhaya duqeymaha xagga cirka ah ee diyaaradaha Maraykanka ay ka geystaan Soomaaliya.
Duqeymaha oo markii hore aanan si cad loo saarin karin, ayaa hadda isu badalay kuwa ay toos u sheegtaan ciidammada Maraykanka ee Afrika ku sugan.
Tusaale ahaan taliska Afrika ee Maraykanka ayaa maanta war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in duqeyn xagga cirka ah ay ku dileen illaa 100 dagaalamayaal Alshabaab ka tirsan.
Waa duqeyntii geysatay qasaarihii ugu badnaa markaliya oo Alshabaab ka dhan ah sanadkan gudihiisa sida Maraykanku sheegtay. BBC-du ma sugi karto warkan, mana jiraan ilo madaxbanaan oo xaqiijinaya.
Bishii maarso ee sanadkii 2016-kii ayaa weerar kan oo kale waxaa la sheegay in lagu diley illaa 150 Alshabaab ka tirsan, kuwaas oo saf ugu jiray si ay uga qalin jabiyaan tabobar la siiyay.
Dowladdii Barack Obama ee Maraykanka ayaa sanadkii 2014-ka kordhisay weerarada cirka ee Alshabaab ka dhan ah, waxaana ka mid ahaa weerar bishii sebtembar, 2014-ka lagu dilay hoggaamiyihii Alshabaab Axmed Godane.
Trump iyo duqeymaha
Weerarada waxa ay aad usii kordheen, islamarkaasna joogto noqdeen tan iyo intii uu Aqalka Cad yimid madaxweyne Trump bishii janaayo ee sanadkan 2017-ka, kaas oo qafiifiyay xeerarka xadaynaya weerarada.
Balse Pentagon-ka ayaa diiday in weerarada batay ay sabab u yihiin talaabooyinka Trump.
Jeneraal Kenneth F. Mckenzie ayaa warfidiyeenada u sheegay in weerarada cirka ee kordhay ay sabab u tahay ‘bartilmaameedyada oo banaanka isa soo dhigay’.
“Ma jiraan wax gaar ah oo aan ka ahayn in ay bartilmaameedyada noqonayaan kuwa la beegsan karo oo banaanka isa soo dhigay, marka aan iska hubino ayaan duqeynaa” ayuu yuru McKenzie.
Shabaabka oo kaliya ma ahan kuwa lala beegsanayo duqeymaha, ee sidoo kale waxaa la duqeynayaa kooxda Daacish ee ku sugan gobolada Puntland.
Bishan November, labo weerar ayaa lagu qaaday bartilmaameedyo Daacish ah waqooyiga dalka.
Waxaa la sheegay in tirada dagaalamayaasha Daacish ay kor u dhaafeen illaa 200 sanadka, iyaga oo sanadkii hore ahaa tiro aad u yar sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Markasta oo uu dhoco weerar xagga cirka ah waxaa soo baxa warar sheegaya in dad shacab ah ay weerarka ku dhinteen, waxaana wararka aad u faafiya Alshabaab.
Dhacdadii ugu saamaynta badneyd waxa ay ahayd middii dhacday bishii Agoosto sanadkan, taas oo ka dhacday deegaanka Bariire, lana sheegay in dad shacab ah ku dhinteen.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arrintaas qirtay, waxayna bixisay magdhow dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay Bariire.
Balse war qoraal ah oo kasoo baxay maanta Maraykanka ayaa lagu sheegay in dadkii Bariire lagu laayay ay ahaayeen dad ka tirsan Alshabaab, islamarkaasna aanan la dilin hal qof oo shacab ah.
Fahfaahin lagama bixinin baaritaanka uu Mareykanku sameeyay iyo caddeyn ku aadan in dadkaasi aanay ahayn rayid.
Maxaa soo kordhiyay weerarada?
Sanadkan oo kaliya wax ka badan 30 weerar oo duqeymo cirka ah ayuu Maraykanka ka geystay gudaha Soomaaliya sida ay tabinayso warbaahinta gudaha ee dalka.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa soo taxday wax ka badan 6 weerar oo Maraykanka ka geystay gudaha Soomaaliya bishan November oo kaliya.
Ma jirto sharaxaad rasmi ah oo laga bixiyay kororka weerarada, laakiin sida ay dhawr jeer sheegeen mas’uuliyiinta heerkooda kala duwanyahay ee Soomaaliya, weerarada ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu wiiqo awoodda Alshabaab xili ay socdaan hawlgalo ka dhan ah.
Ciidammada dowladda ayaa Shabeelaha Hoose todobaadyadan ka waday duulaamo ka dhan ah Alshabaab, waxaana halkaas kasoo qaxay kumanaan qof oo shacab ah, kuwaa oo gaaray duleedka magaalada Muqdisho.